Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ-BD-LS-009
Matte Lipstick Richly Pigmented Mineral Lipstick 100% Eke Nwa-adịghị egbu egbu, Obi ọjọọ na Paraben Free Long-adịgide adịgide lipstick.
Mara mma na inogide, matte lipstick bụ ezigbo, creamy, eyi na-eguzogide, na-abụghị ihicha na ukwuu na agba.
Nke mbu:Anyị matte lipstick set nwere ọtụtụ ewu ewu nkecha agba. Maa mma matte, ogologo na-adịgide adịgide na waterproof, mfe iji wepụ na egbugbere ọnụ ọcha mmanụ. ederede dị nro na agba na-enwu gbaa iji mee ka egbugbere ọnụ gị dị nro ma dị nro.
Abụọ mbụ:Ejiri ihe okike eme ihe, maka ụdị anụ ahụ niile, gụnyere akpụkpọ anụ. Site na akwa nkpuchi matte lipsticks, ha na-ete akwa ma na-adịgide adịgide.
Ezigbo na soft matte Lipstick, a na-awụ akpata oyi-eji ire ụtọ matte lipstick nwere plush na ink matte agba, na-eji ire ụtọ matte mmetụta nwere ike ozugbo slide na-edebe ya na ebe.
Nkwenye na nrọ, lipstick a matte adịghị akpọ nkụ, mgbe niile ude, nrọ na matte! Ugbu a, e nwere usoro nke agba ọhụrụ matte ịhọrọ site na. Smartdị agba lipstick ndị a mara mma bụ kpọmkwem ihe egbugbere ọnụ gị chọrọ.
Nke mbụ:Ọ bụ ihe silky, ọmarịcha ma mara mma, mechie egbugbere ọnụ gị nke ọma, dabara maka oge niile a kara aka, ọkachasị n'ọfịs, mkpakọrịta nwoke na nwanyị, ịzụ ahịa, oriri na ndị enyi. Zuru oke dị ka onyinye nye onye ị hụrụ n'anya, ezinụlọ na ndị enyi maka ụbọchị ekeresimesi, ụbọchị Valentine, ụbọchị ọmụmụ na ememme ndị ọzọ.
Anyị ghọtara na ị na-arụsi ọrụ ike, ọ bụ ya mere anyị ji kee lipstick a na-adaba adaba. Ọ na-abịa na kọmpat ụdị ihe ị nwere ike ịchụpụ n’ime akpa gị ma ọ bụ akpa etemeete.
Nke mbụ:Egbugbere ọnụ na-acha odo odo, dị mma karịa agba ndị dara oké ọnụ na mmetụta na-emetụ n'ahụ. JOYO lipstick jupụtara na ihe na-edozi ahụ ma nwee ike ime ka egbugbere ọnụ gị dị nro.
Ọmarịcha Moisturizing egbugbere ọnụ Agba, jiri JOYO lipstick mee ka egbugbere ọnụ dị nro, dị mma na ooh. Họrọ site n'ụdị anya na-adọrọ anya maka agba ude na-adịte aka na ude mmiri siri ike.
JOYO Lipstick, ma ị chọrọ obi ike red lipstick ma ọ bụ zuru okè ịgba ọtọ agba, ị nwere ike họrọ a na agba dị iche iche n'oge. Họrọ Matt lipstick, mepụta ụda agba dị elu, ma ọ bụ họrọ lipstick agba ude iji mepụta egbugbere ọnụ dị nro, dị nro ma dị mmiri mmiri.
Lipstick application, ụbọchị ọmụmụ, agbamakwụkwọ, ọzọ, Halloween makeup, oriri mmanya, oge akwụkwọ, onyinye ụbọchị Valentine, onyinye ekeresimesi, wdg.
Nke gara aga: Ihu etemeete-BD-CH
Lmụ agbọghọ Lipstick
Egbugbere ọnụ Shades
JOYO © Ikike niile echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Ihe kacha mma, Matte Eyeshadow Palette, Anya Anya ọla edo, Shimmer Lipstick, Obere lipstick, Kacha mma ude Eyeshadow, Ngwa niile